Waa maxay qoro caafimaad? | USAHello | USAHello
Marka aad tagto dhakhtar, isaga ama iyada ku tidhaahdaa laga yaabaa in aad daawo u baahan tahay. Daawada waxa loo yaqaan daawo ama mararka qaarkood daroogada ee USA. Dhakhaatiirta qoro daawooyinka caafimaad ee daawada kaa caawin doona. Waxaad qaadan kartaa daawada caafimaad si aad farmashiye degaanka, ama farmashiyaha.
Waa maxay daawo?
Daawooyinku waa walxaha in lagu daaweeyo xanuun iyo cudur. Mararka qaarkood waxay kaa caawin karaan in ay joojiyaan calaamadaha marka aad jiran tahay. Americans wac daawo “daawooyinka” ama “daroogada.” Mararka qaarkood waxay yidhaahdaan “daawooyinka la soo qoro” in ay si cad in aanay hadalka ku saabsan daroogooyinka sharci darrada ah.
Waa maxay qoro caafimaad?
qoro A caafimaad waa amar daawo. qoro waa note ka dhakhtarkaaga aad qaadi karto si farmashiyaha ama farmashiye si aad in farmashiistaha ogyahay yeelan kartaa dawadan.
Waa maxay farmashiyaha?
farmashiyaha A waa meel u diyaariya daawada caafimaadka iyo dawooyinka iibiya. bixiyahaaga ayaa kuu sheegi kara magaca iyo cinwaanka ee farmashiyaha waa kuu haboon. All iska-, cusbitaallada iyo xarumaha badan, iyo dukaamada qaar ka mid ah waxay leeyihiin farmasiiyada.
dhakhtarkaaga iyo shaqaalaha farmasiiga Labada waa in loo xaqiijiyo in aad fahamto sida ay u qaadato daawadaada. Haddii aad la wareersan tihiin ama aad qabto wax su'aalo ah ama shaki, weydii! Waxay Dooni inay ka caawiyaan in aad fahanto.
Waa maxay daawo-the-counter?
Mararka qaarkood, dhakhtarku ku talin karaa in lagu “in ka badan-the-counter” daawo. In ka badan-the-counter-daawooyinka jira daawooyin kaas oo aadan u baahnayn warqad dhakhtar. Waxaad si fudud u socon karaa farmashiye kasta oo iyaga ka iibsan.
Generic iyo brand name daawooyinka
daawooyinka magaca Brand waa daawooyin yihiin in ay leedahay iyo suuq magaca shirkad gaar ah ee. Waxay yihiin daawooyinka inta badan ka cusub (daawo), ama daroogada xaalado gaar ah.
daawooyinka guud waa versions jaban daawooyinka brand-magacaaga ka shaqeeya la mid ah sida magaca dhigooda. Sidaa darteed, haddii uu takhtarkaagu kuu qoray qoro daawo a, waa fikrad wanaagsan sida caadiga ah si aad u weydiiso oo fiiriya hadday jirto waa version ah generic heli karo sababta oo ah waxa idinka badbaadin doonaa lacag.
Raac tilmaamaha dhakhtarkaaga
Had iyo jeer raac tilmaamaha uu dhakhtarku ee ku saabsan daawooyinka caafimaad. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin fudud si aad u raacdo:
Qor dhammaan daawooyinka aad qaadato, iyo ku qor haddii ay dhakhtar soo qoray ama haddii ay yihiin daawooyinka-the-counter.
Qor wax vitamins ama supplements kale ee aad qaadato.
Had iyo jeer qaadato daawadaada waqti isku mid ah maalin iyo si waafaqsan tilmaamaha dhakhtarka.
Weydii dhakhtarkaaga sida aad u baahan tahay si aad u qaadato, sida biyo, cunto, ama calool madhan.